Dooktar Abiy Ahmad giddu gala Meedikaalaa Yuunvarsiiti Jimmaa eebbisiisa - Oromia Broadcasting Network - OBN
Dooktar Abiy Ahmad giddu gala Meedikaalaa Yuunvarsiiti Jimmaa eebbisiisa
Yuunvarsiitin Jimmaa boru bakka Ministeerri Muummee Dooktar Abiy Ahmad fi keessummoonni biroo argamanitti giddu gala Meedikaalaa eebbisiisa.
Giddu galli meedikaalaa eebbifamu sireewwan 800 kan qabu yoo ta’u, kutaa Kibba Lixaa biyyaatitti namoota miiliyoona 20 oliif tajaajila ni kenna jedhameera.
Giddu galichi biyyoota Ollaa kaneen akka Suudan Kibbaaf tajaajila kennuu haala danda’uun ijaarrame.
Yuunvarsiitichi kadhimatoota Fayyaa 131 dabalatee eebbifamtoota digirii 2ffaa kuma 2 ol Ogummaa gara garaan barsiisa ture ni eebbisiisa.
Istaadiyeemiin namoota kuma 40 qabatu, bu’uuraalee misoomaa fi galmi Yuunvarsiitichi ijaarsise ni eebbifamu jedhamee eeggama.
Galmi eebbifamuu galma walgahii teessoo kuma 4 fi 500 qabu, galma nyaataa namoota kuma 1 fi 500 qabatu fi galmoota wal gahii xixiqqaa lama kan qabu yoo ta’u Magaalaa Jimmaa giddu gala konfaransii taasisuuf yaadamee kan ijaarrame ta’uun himameera jechuun FBCtu gabaase.
Baankin Addunyaa Walii Galtee Liqii Birrii Biiliyoona 2.7 Itiyoophiyaaf Mallatteesse
About Us OBN provides audiences in the Oromia with high quality and distinctive services across television, radio and online. In the Oromia the OBN provides 17…
Dhukkubni ilkaanii maali?
Ilkaan keenya midhagina isaa akkuma qabatetti akka turuuf hoo maal gochuu qabna? Dhibeen ilkaanii foolii afaanii hamaa fiduu danda'aa? yoo ta'e haala kamiin ofirraa…
OBN TV ,Radio and Latest Media - Latest News and announcements from across the Broadcaster OBN is the Oromia’s leading public service broadcaster. OBN provides…
Heloo Doktar ‘ Dhukkuba Narvii’ Muddee 07, 2011
This Month : 2724
This Year : 11425
Total Visit : 200996
Total Hits : 53830